ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးရေးအတွက် တရုတ်ဘီလ...
16 มี.ค. 2563 - 17:17 น.
အလီဘာဘာကုမ္ပဏီကိုပူးတွဲတည်ထောင်သူဖြစ်တဲ့ ဂျက်မားက ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးရေးပစ္စည်းတွေနဲ့ နှာခေါင်းစည်းတွေပါဝင်တဲ့ လှူဒါန်းပစ္စည်းတွေကို ပထမဆုံးအသုတ်အနေနဲ့ အမေရိကန်ကို ပို့ပေးလိုက်ပါတယ်။
ရှန်ဟိုင်းမှာ လေယာဉ်တစီးပေါ်ကို ကုန်ပစ္စည်းထုပ်ကြီးတွေတင်နေတဲ့ ဓာတ်ပုံ ၂ ပုံကို တရုတ် ဘီလီယံနာကြီးက တွိလုပ်ပါတယ်။
အမေရိကန်နိုင်ငံကို ကိုရိုနာဓာတ်ခွဲပစ္စည်းစမ်းသတ်ရေးပစ္စည်းအစုံ ၅ သိန်းနဲ့ နှာခေါင်းစည်း ၁ သန်း သူပေးလှူမယ်ဆိုတာကို ဒီလအစောပိုင်းတုန်းက ပြောခဲ့ပါတယ်။
မစ္စတာမားက ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါပြန့်ပွားတဲ့အရေးကို တိုက်ဖျက်ဖို့အတွက် နိုင်ငံတကာက ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ကြဖို့ တိုက်တွန်းထားသလို ဥရောပကိုလည်း ကျန်းမာရေးအထောက်အကူပစ္စည်းတွေ ပေးပို့ဖို့ရှိပါတယ်။
အာရှရဲ့အချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်က China Eastern လေကြောင်းလိုင်းက ဂျက်လေယာဉ်တစီးပေါ် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်စမ်းသပ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေနဲ့ နှာခေါင်းစည်းတွေ ပါတဲ့ ပုံးတွေတင်နေတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို သူ့ရဲ့ ပထမဆုံး တွစ်တာပိုစ့်မှာ တင်ပါတယ်။
အခုလှူဒါန်းမှုကို ဂျက်မား ဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့ အလီဘာဘာ ဖောင်ဒေးရှင်းတို့က လုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီး ဂျပန်၊ တောင်ကိုရီးယား၊ အီတလီ၊ အီရန် နဲ့ စပိန် တို့အပါအဝင် တခြားနိုင်ငံတွေကိုလည်း အကာအကွယ်နှာခေါင်းစည်းပေါင်း ၂ သန်း ကို လှူဒါန်းခဲ့သလို ဥရောပနိုင်ငံတွေ ကို ထပ်လှူဒါန်းဖို့လည်း ကတိပေးထားပါတယ်။
အဲဒီအဖွဲ့အစည်းတွေက အီတလီနိုင်ငံကို ရည်ရွယ်ပို့ဆောင်တဲ့ နှာခေါင်းစည်း ၅ သိန်းနဲ့ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ရေးပစ္စည်းတွေအပါအဝင် တခြားကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အထောက်အကူပစ္စည်းတွေဟာ သောကြာနေ့က ဘယ်လ်ဂျီယမ်နိုင်ငံကို ရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီ။
တခြားနာမည်ကျော် နည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးတွေရဲ့ ဦးဆောင်သူတွေ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် သုတေသနနဲ့ အဲဒီရောဂါကာကွယ်ရေးအတွက် ထောက်ပံ့ပေးမယ်လို့ ကတိတွေပြုနေကြတဲ့အထဲ ဂျက်မားလည်း ပါဝင်လာတာပါ။
မိုက်ကရိုဆော့ဖ် ကုမ္ပဏီ ပူးတွဲတည်ထောင်သူလည်းဖြစ်၊ ကမ္ဘာမှာ ဒုတိယအချမ်းသာဆုံးလူလည်းဖြစ်တဲ့ ဘီလ်ဂိတ်က ဘီလ် နဲ့ မဲလ်လင်ဒါဂိတ် ဖောင်ဒေးရှင်းက ဒီဗိုင်းရပ်စ်ပိုးပြန့်ပွားမှု ရပ်တန့်စေဖို့အတွက် ဒေါ်လာ သန်း ၁၀၀ အကူအညီပေးမယ်လို့ ကြေညာထားပါတယ်။
သောကြာနေ့တုန်းကလည်း မစ္စတာ ဂိတ်က ပရဟိတအကူအညီပေးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ ပိုအချိန်ပေးချင်တဲ့အတွက် မိုက်ကရိုဆော့ဖ် ကုမ္ပဏီဘုတ်အဖွဲ့ကနေ သူနုတ်ထွက်မယ်လို့ ကြေညာခဲ့ပါတယ်၊ သူက ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး၊ ပညာရေး နဲ့ ရာသီဥတု ပြောင်းလဲရေးကို ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်တဲ့အရေးတွေမှာ ပိုအာရုံစိုက်လုပ်ကိုင်ချင်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
อัลบั้มภาพ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးရေးအတွက် တရုတ်ဘီလီယံနာ ဂျက်မားက အမေရိကန်ကို လှူဒါန်း